Walking on Doha Strand Road - Linn Htet Aung
Qatar ကို မလာခင် Qatar အကြောင်း ရှာဖတ်ကြည့်တယ်။ ပုံတွေ ရှာတယ်။ Google Image မှာ တက်လာသမျှပုံတွေက အခု မြင်နေရတဲ့ နေရာကို ရိုက်ထားတာ များတယ်။ မီးတွေထိန်လင်းနေတာပဲ။ တိုက်တွေကလည်း အမြင့်ကြီးတွေ။
တကယ်ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှ သိလိုက်တာ အဲဒီနေရာတခုပဲ တိုက်အမြင့်ကြီးတွေနဲ့ မြို့လယ်ခေါင်လို ဖြစ်နေတာ။ 😄
ကျန်တဲ့နေရာတွေက တစ်ထပ်တိုက်၊ နှစ်ထပ်တိုက်လေးတွေ။ ဝါကျင်ကျင်အရောင်တွေချည်း။ ပြီးတော့ တပုံစံထဲပဲ။ တမြို့လုံးကတော့ လမ်းတွေအကျယ်ကြီး၊ ညဆို မီးတွေ ထိန်ထိန်လင်းနေတာပဲ။
ကမ်းနားလမ်းတလျှောက် ဒီလို အခမဲ့ မိုဘိုင်းလ် အားသွင်းတဲ့ နေရာလေးတွေ ထားပေးထားတယ်။ ညနေ နေကျသွားတဲ့အချိန်ဆိုရင် စည်စည်ကားကား ရှိတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့သူ ပြေးတဲ့သူ အပန်းဖြေတဲ့သူတွေနဲ့ စည်ကားပါတယ်။
Self Service Machine for Watar, 500ml for 1 Riyal
တချို့နေရာလေးတွေမှာ ဒီလို Self Service စက်ကလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ကော်ဖီစက်၊ ရေသန့်ဗူးစက်၊ ATM၊ Mobile Topup စက် စတာတွေအပြင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ ကိရိယာလေးတွေလည်း လမ်းတလျှောက် ထားပေးထားတယ်။
လမ်းတဖြတ်တိုင်းမှာ တွေ့နိုင်တဲ့ အစ္စလာမ် ဘုရားဝတ်ပြုကျောင်း (ဗလီ) ငယ်လေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ ဘုရားဝတ်ပြုချိန် ကြုံနေရင် ဝင်ရောက် ဝတ်ပြုလို့ ရပါတယ်။
ကမ်းနားမှာ လမ်းလျှောက်နေရင်း တဖက်က Souq Waqif လို့ခေါ်တဲ့ ပန်းခြံဖက်ကို ဖြတ်ကူးဖို့ကို မြေအောက်ကနေ ဖြတ်ကူးလို့ရပါတယ်။ ပုံမှန် လှေကားနဲ့ ဆင်းသွားပြီး မြေအောက် ကားပါကင်ကနေ ကူးနိုင်သလို ဓာတ်လှေကား (Lift)၊ စက်လှေကား စတာတွေနဲ့ ဆင်းပြီး ကားပါကင်ကနေတဆင့် လမ်းကူးနိုင်ပါတယ်။ မြေအောက် ကားပါကင် ဆိုပေမယ့် မျက်စိ လည်စရာပါ။ အရမ်းကို ကျယ်ပါတယ်။
ကမ်းခြေတလျှောက် အပျော်စီး လှေတွေ ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့် ညပိုင်းမှာ လူစည်ကားတဲ့အတွက် ပိုပြီး ထွက်ကြပါတယ်။ ရေပြင်တလျှောက် မီးတန်းလေးတွေ အလှဆင်ထားတဲ့ လှေလေးတွေကို တွေ့ရမှာပါ။ နောက်တခေါက် ကြုံရင်တော့ လှေစီးကြည့်ပြီး ပင်လယ်ထဲ လေတဖြူးဖြူးနဲ့ အပန်းဖြေပါဦးမယ်။
Doha, 2017 December 06
Anonymous February 3, 2022 at 11:44 AM
Videoslots.cc : Play Slots Online (Live Video) - Video Dodl.cc
Watch youtube converter and download videoslots.cc free.0Comments.0Following. 0.0Following.0Posts.0comments.0Comments.0Comment.0Comments.0Comments.
Unknown April 10, 2022 at 6:37 PM
Get 50% up to €/$100 https://jancasino.com/review/merit-casino/ + 50 Free Spins · Visit https://deccasino.com/review/merit-casino/ the official site · Log in to your Casino Account · gri-go.com If you do not agree to the terms of the 출장마사지 terms of the herzamanindir agreement,